भारत लैजान लागेका दुई युवतीको उद्दार, एक पक्राउ | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. शुक्रबार, माघ १७, २०७६ १४:३३:४०
भारतमा जागिर लगाइदिने भन्दै मानव तस्करको फन्दामा फसेका दुई युवतीको उद्दार गरिएको छ । ती युवतीलाई पूर्व नाका झापाको मेचीनगर ६ स्थित काँकडभिट्टाबाट उद्दार गरिएको प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायव उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
युवतीका अभिभावकलाई समेत थाहा नदिई पोखरेलले प्रलोभन देखाएर भारत लैजान लागेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी नायव उपरीक्षक श्रेष्ठले बताए।
पक्राउ गरिएको पोखरेललाई झापा जिल्ला अदालतमा पेस गरी मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी मुद्दामा चलाएको छ। उद्दार गरिएका युवतीलाई साना हातहरू भन्ने संस्था काँकडभिट्टाको संरक्षण गृहमा पठाइएको जनाइएको छ।